Israa’il Oo Suudaan Ugu Deeqday Qamadi Badan Oo Ay ku Abaal-marinayso Xiriirkii ay la Yeelatay |
Israa’il Oo Suudaan Ugu Deeqday Qamadi Badan Oo Ay ku Abaal-marinayso Xiriirkii ay la Yeelatay
Maamulka Israa’iil ayaa shaaca ka qaaday qamadi badan in ay u dirayaan dalka Sudan oo xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ka jirto, waxa ayna Israa’iil caawinaad abaal gud uga dhigeysaa dowlada Sudan oo dhawaan xiriir cusub yeesheen.
War qoraal ah oo kasoo baxay Xafiiska Ra’isul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in dowlada Sudan ugu deeqayaan qamadi badan oo qiimihiisa lagu sheegay lacag gaareysa 5-Milyan oo dollar.
“Waxaan sugeynaa nabad diirran oo waxaan si dhaqso leh ugu diraynaa $ 5 milyan oo qamadi ah asxaabteena cusub ee Suudaan. Israel ayaa si dhow ula shaqeyn doonta USA si ay uga caawiso kala guurka Suudaan.” ayaa lagu yiri Qoraalka Israa’iil kasoo baxay.
Maamulka Israa’iil iyo Sudan ayaa dib usoo celiyay xiriirkooda kadib wada xaajood Mareykanka garwadeyn ka ahaa oo dhacay, waxaana labada dhinac la filayaa in heshiis rasmi ah qalinka ku duugaan uuna dib usoo wada laabto xiriirka ka dhaxeeya.
Dalka Sudan oo xukunkiisa la wareegeen milatari ayaa isbadal badan lagu sameeyay siyaasadiisa, waxaana Sudan oo hada xaalad adag wajaheysa dhawaan heshiis la gashay Israa’iil kadib cadaadis uga yimid dowlada Mareykanka.